[Isitolo Seyadi Encane-HNA Haoting Store①] Igumbi elikhulu elivulekile elingamamitha-skwele angu-70 emphakathini osezingeni eliphezulu // Isikhungo seDowntown iXinyue Square, i-Qilou Old Street, Ingoma nethiyetha yoMdanso, Uhulumeni Wesifundazwe - I-Airbnb
[Isitolo Seyadi Encane-HNA Haoting Store①] Igumbi elikhulu elivulekile elingamamitha-skwele angu-70 emphakathini osezingeni eliphezulu // Isikhungo seDowntown iXinyue Square, i-Qilou Old Street, Ingoma nethiyetha yoMdanso, Uhulumeni Wesifundazwe
I-ifulethi ephelele ibungazwe ngu-Xianli
-Indlu itholakala engadini yaseNingizimu ye-HNA Plaza, i-Guoxing Avenue. Izithombe zonke ziyizithombe zangempela ezithathwe omakhalekhukhwini futhi zintsha kakhulu. Ungazithanda ngaphandle kokukhathazeka. Impendulo etholwe kubavakashi empeleni ingcono kunezithombe. kuyinto nakanjani ephezulu CBD emphakathini., 70 square metres, sizungezwe Riyue square, Hainan Isakhiwo, uhulumeni wesifundazwe, njll
-Smart password lock.
-Indawo yokulala ifakwe isethi yezingcezu ezine ze-brocade satin yama-60s, umatilasi we-latex, umcamelo wevelvet wezimpaphe kanye nendwangu kasilika evumela isikhumba, njll.
-Izitsha zasekhishini eziphelele, ezifakelwe ipani elinganamathi, i-millet rice cooker, igedlela likagesi, imimese nezinti, njll.
-Amahora angu-24 amanzi ashisayo + i-WIFI, umshini wokuwasha, isiqandisi, isomisi sezinwele, i-aroma diffuser, indlu yokugezela ehlukene enokomile okuhlukene nokumanzi.
-Indlu ifakwe i-central air-conditioning, i-XGIMI Z6X projektha kanye nesikrini sikagesi esingu-100 inch, isibani sokubhala sokushaja okungenantambo se-QI.
-Izinto zokugeza eziphelele (amathawula, izixubho ezithambile zaseJapan, ishampoo nokugeza umzimba).
-Uma ungumthandi wetiye, igceke libuye lifakwe isethi yetiye emhlophe ye-mutton jade.
-Yakha indawo yomphakathi evumelanayo futhi ungathinti omakhelwane noma abahlali bomphakathi.
-Kudingeka ubonise ikhadi lakho le-ID ukuze ungene. Uma ungayikhokhi idiphozi ku-inthanethi, udinga ukukhokha ama-yuan angu-500 ungaxhunyiwe ku-inthanethi.
-Izitsha zasekhishini ziyatholakala ukuze zisetshenziswe mahhala (zidinga ukuhlanzwa, ngaphandle kwalokho kuzokhokhiswa imali yokuhlanza engu-50 yuan).
-Uma unogesi ongaphezu kuka-30 kilowatt ngosuku, udinga ukukhokha ngezindleko zakho. (Ukusetshenziswa okuvamile ngeke kudlule lokhu).
-Nakekela kahle izinsiza zendlu kanye nokukhucululwa kwendle Uma noma yiziphi izimpahla zendlu zonakele, isinxephezelo siyokwenziwa ngenani.
Itholakala kuGuoxing Avenue, amamitha angama-500 ukusuka eRiyue Square futhi ngaphakathi kwebanga lokuhamba ngezinyawo.
Xhumana nathi phakathi namahora angu-24.